Lucas Digne - lokhu ingenye abanamakhono kakhulu abadlali abasha kule plan ukuzivikela eFrance. Uneminyaka engu-23 kuphela ubudala, futhi uye wakwazi ukudlala in the amakilabhu esiqine eYurophu. Kodwa hhayi ukuthi yonke into ihamba kahle kule career ye wasemuva kakhulu. Lucas Digne kwesokunxele "PSG" ngesizathu, futhi uma sizibuza ukuthi kungani lokhu kwenzekile, ke lesi sihloko ukuphi.
umsebenzi Okuqala ngokudlalela "Lille"
Lucas Digne wazalwa ngoJulayi 20, 1993 eFrance kakade eyisithupha ubudala wajoyina Academy yeqembu "Marey-sur-Ourcq", lapho afike achitha khona iminyaka emithathu. Khona-ke wathuthela Academy lomunye club encane - "Crépy-en-Valois." Elapho futhi bahlala iminyaka emithathu, kwaze kwaba ekugcineni akazange singene sokuqeqesha omunye Ligue 1 amakilabhu - "Lille". Umfana oneminyaka engu-12 ubudala abaqeqeshiwe kanzima, iminyaka eyisithupha kamuva, lapho eseneminyaka eyishumi nesishiyagalombili, wathola inkontileka okhokhelwayo. Ngenkathi yakhe yokuqala Waqhubeka emkhakheni izikhathi 18 kuphela, kodwa ngonyaka olandelayo waba ngomdlali njalo. Yena odlale 41 okufanayo, amagoli amabili, futhi lokhu yabakhanga amaqembu enkulu phakathi kwabo kwakukhona umuntu omude "PSG". Lucas Digne iye elilinganiselwa ezigidini ezingu-15-euro, futhi ngo-2013 waqala ukuvikela imibala Paris Club.
Inguquko kuya "PSG"
Lucas Digne - football, ithalente akukho kungabaza ngalokho. Nokho, ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhundla e club ezimbili abanamakhono umdlali ethembisa. Yilokho okwenzeka ku "PSG". Ingabe Dinh uvele esincintisana ngaphakathi the bombo of Leuven layvin kurzawa eyathatha isikhundla Lucas kusukela phansi. Ngenxa yalokho, iminyaka emibili Paris club Lucas ukudlalwa imidlalo 43 kuphela, eziningi zazo waphuma kuphela esikhundleni. Ngenxa yalokho, ngo-2015, i-Paris Club wakhetha ukunika umdlali ebolekiswe, ngakho-ke ayihlali ithalente lakhe ebhentshini.
Qasha ku "Roma"
Zinikele ukusiza bazicelela club Roman "Roma", okwakuthatha Dinh ukuze iqashwe isikhathi esingaphezu konyaka. E-Italy, uLucas ngokushesha ngokwanele ukuba balukhulume futhi play: isizini washiya emkhakheni izikhathi 42 futhi amagoli amathathu. Nokho layvin kurzawa wabonisa imiphumela ngokulinganayo umxhwele, ngakho kobuholi Paris Club benquma ukuthengisa le engumFulentshi abasha. "AmaRom" bayokujabulela sithengisise umdlali aqashiwe, kodwa inani layo likwenza ubone ukuthi ukubeka baseParis kwenzakala amaRoma wathanda ukuba kukulahlekele. Kodwa eyishumi nesithupha nengxenye million euros uvumile ukukhokhela Catalan "Barcelona", omunye amakilabhu amathathu eziqine kakhulu emhlabeni.
A nesiqalo esisha "Barcelona"
Hlobo luni umdlalo manje kubonisa Lucas Digne? "Barcelona" - hhayi club lapho ungathola endaweni inhliziyo nje. Lucas kufanele silwe isikhathi enkundleni ngu Jordi Alba, ngubani isanda abalimala. Ngakho-ke manje Dinh iyona ngomdlali ku "Barcelona", yena wadlala imidlalo emihlanu futhi kusulwe ke.
Ithimba French Dinh yaqale icele ngoMashi 2014, lapho eneminyaka engu-21 kuphela ubudala. Weza off kwebhentshi esikhundleni uPatrice Evra ngendlela enobungani ngokumelene Holland. Njengoba ayebe 90 amaminithi kuphela eqenjini lesizwe, Dinh wabizelwa World Cup 2014, eyakhishwa kuphela kwelinye iqembu umdlalo esiteji ngokumelene Ecuador. Ngesikhathi Championship European ngo-2016, naye waya kanye nethimba, kodwa esichithwa ensimini ngeminithi. Sekukonke Dinh ibala 14 ofeleba.
Unozinti Turkish Volkan Demirel
Idolobha laseZlatoust. Ithempeli laseSeraphim laseSarov
Zonke abawinile of the Europa League
Umshini omnandi ngezandla zakho
Russia - lena ezweni kunabo bonke emhlabeni
Banana khekhe. Indlela Yokuphila Isikhathi dessert esimnandi
Motoblock "Agro" - i umsizi kahle emndenini
Felting: imvu uvolo. Dry felting iwundlu: Master Class
Indlela yokwenza ikhofi green kwesisindo esifanele?
Dalat ezikhangayo: Lake Xuan Huong ehhotela "Crazy House", imoto ikhebula, imbali ingadi